Mazuva manomwe Anotsanya Uye Munamato Wekubudirira Mune Mhedzisiro Mhinduro | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Mazuva manomwe Anotsanya Uye Munamato Wekubudirira Mune Mhedzisiro YeMibvunzo
1 Kunze kwekunge Jehovha avaka imba, vanoshanda pasina vanoivaka, kunze kwekuti Jehovha akachengetedza guta, murindi anomuka asi pasina.
Kuda kukuru kwaMwari kune vese Vana vake ndekwekuti vabudirire munzvimbo dzese dzeupenyu. 3 Johane 2 inotitaurira kuti zvishuvo zvikuru zvaMwari ndezvekuti isu tane kutenderera budiriro, mweya, mweya uye muviri. Kubudirira uku kunosanganisirawo vadzidzi vedu. Nhasi tichave tichiita mazuva 7 tichitsanya neminamato yekubudirira mune bvunzo, uku kutsanya nemunamato ndiko kukumbira nyasha dzaMwari kuzorora pamusoro pebasa redu. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kutsanya nemunamato pasina kudzidza zvakaenzana nekukundikana kwekunyora. Kuti iwe upase bvunzo dzako Mwari anotarisira kuti iwe udzidze mabhuku ako, anoda kuti iwe uve mudzidzi anoshanda kwazvo, muna 2 Timotio 2:15, tinokurudzirwa kudzidza kuti ugotenderwa. Mwari achango batsira mudzidzi anoshingairira kuti abudirire mu bvunzo dzake.
Mumwe anogona kubvunza, kana ndichifanira kudzidza zvakaoma, saka nei ndichifanira kunamata? Ndiwo mubvunzo wakanaka. Tinonamata nekuti isu tinoziva kuti Mwari ndiye unopa venyasha dzose. Ndiye anopa huchenjeri uye anonzwisisa. Tinonamata nekuti isu tinobvuma kuti Mwari ndiye anotonga zvese zvinhu nemhedzisiro. Zvakare tinonamata nekuti tinoziva kuti kunyangwe isu tingave takadzidza, tinoziva kuti hazvisi nesimba, kana simba asi nerubatsiro rweMweya wake, Zekaria 4: 6. Chimwe chikonzero chakanaka chinoita kuti tinamate ndechekutungamirirwa neuMwari kuti vaverenge misoro yakakodzera, iwo mweya unoera unokwanisa kutitungamira kuti uverenge mamiriro akakodzera eongororo Isu tinonamatira zvakare kudzima nzira dzese dzehusatani panguva dzebvunzo, manipulations aSatani anogona kuve anouraya zvakanyanya, nyaya dzakaita sekusiya zvinyorwa, mhinduro dzakashaika, kana kunyangwe kurambidzwa chaiko kwenzvimbo yekubvunzurudza zvese nzira dzese dzesatani. Paunenge uchigadzirira muviri wako bvunzo, iwe unofanirwa kuzvisimbisa pamweya nekuita ino 7 mazuva kutsanya uye munamato wekubudirira mune bvunzo mhinduro. Dhiyabhori haakwanise kuramba ichi combo. Ndiri kukuona uchikunda mune bvunzo dzako muzita raJesu.
Kutsanya Uye Munamato: Zuva 1-3:
1.Ishe Jesu, ndinokuropafadza uye ndinoreurura kuti masimba ese ndeawe.
2. Ndinodzima kutuka kose kwekutadza muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
3. Ini ndinodonhedza simba rose rekutadza muhupenyu hwangu, muwanano yangu, mubhizinesi rangu, zvese munyama nepamweya, muzita raJesu.
4. Yese pombi yekutadza muhupenyu hwangu, ngaipiswe nemoto waMwari ikozvino, muzita raJesu.
5. Chero chipinganidzo cheMweya uye chinogadzirisa kubudirira muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti uputse muzvidimbu, muzita raJesu.
6. Chese chinogarwa nhaka uye nekuzvitadza pachako chakakundikana muhupenyu hwangu, ndinokurayira kuti utambe muzita raJesu.
7. Nzvimbo yega yehupenyu hwangu yandakarasikirwa nekutadza, ndinokurayira kuti udzorere, muzita raJesu.
8. Mbeu yega yega yekutadza muhupenyu hwangu, ndinokuraira kuti upiswe nemoto waMwari, muzita raJesu.
9. Iwe mweya wekutadza, sunungura bata hupenyu hwangu, muzita raJesu.
10. O Ishe, regai ndipinde mumusungo wekutadza muzita raJesu
11. Ini ndinoramba kunyoresa muchikoro chekutadza, muzita raJesu.
12. Jesu, ndinokutendai nekuti Makandipa kukunda muzita raJesu
Kutsanya Uye Munamato: Zuva 4-6:
1. Jesu, ndinokutendai nekuti ndimi mureza wangu, uye muzita renyu ndinokunda muhoro iyi.
2. Iwe mweya unoongorora, ndinokuwisira parutivi uye ndinokuraira kuti ubviswe, muzita raJesu.
3. Ini ndinotyora zvakaipa kutenderera kweangu (Taura zita renyorwa bvunzo kana Chinyorwa) bvunzo, muzita raJesu.
4. Ropa raJesu, simbisa hupenyu hwangu kupokana nekuperetera kwese, enchantments uye kutaura kwasatani kupikisa kubudirira kwangu pabvunzo muzita raJesu.
5. Iwe murume akasimba wakagara pakubudirira kwangu, usave unseated nekutinhira kwaMwari, muzita raJesu.
6. Ini ndinoramba mweya wekukanganwa, ini ndinoramba mweya wekushushikana uye ini ndinoramba mweya wekukanganisa, muzita raJesu.
7. Ini ndinomira ndichipesana nemweya wega wega wekutadza, muzita raJesu.
8. Ini ndinoramba zvese zvaSatan zvemanyawi angu ekupedzisira, muzita raJesu
9. Rega, zviitiko zvese zverima muvadzidzi vangu zvikundikane zvakashata, muzita raJesu.
10. Ini ndinogashira mweya wakanaka kwazvo mushure mekurongeka kwaBhezareeri, muzita raJesu.
11. Ndinogashira kurangarira, kushinga uye nepfungwa dzakanaka, muzita raJesu.
Kutsanya Uye Munamato: Zuva rechinomwe:
1. Ndine nzwisiso kupfuura vadzidzisi vangu nevadzidzisi, nekuti zvipupuriro zvaMwari ndiwo mafungiro angu, muzita raJesu.
2. Ishe ndipeiwo kunzwisisa nehungwaru muzita raJesu
3. Ini ndinogashira huchenjeri, ruzivo uye nzwisiso yezvidzidzo zvangu, muzita raJesu.
4. Ngirozi dzaMwari mupenyu, dzikomberedza dzakandikomberedza ikozvino uye enda pamberi pangu kuita hurukuro uye bvunzo, muzita raJesu.
5. Baba ishe, ndizorei kuti ndibudirire muzvidzidzo zvangu muzita raJesu
6. Yese mibvunzo yakanangiswa kuna Danieri yakapindurwa, saka ndinofanira kuva nemhinduro dzakarurama kumibvunzo mukubvunzurudzwa, muzita raJesu.
8.Ndichawana nyasha pamberi pevadzidzi vese, muzita raJesu.
9. Ishe vanofanirwa kuita zvese zvakakwana nezvezvidzidzo zvangu.
10. Handidzidze zvisizvo, muzita raJesu.
11. Ndinosunga nekupa pasina mweya yose yekutya, muzita raJesu.
12. Ndinozvisunungura kubva kumweya yega yega yekuvhiringidzika uye yekukanganisa, muzita raJesu.
13. Baba Ishe, Isa ruoko rwako rwemoto pandangariro dzangu uye undipe ndangariro dzinoyeuka, muzita raJesu.
14. Ishe, ndichengete ndakashingairira muzvakavanzika zvangu mune zita raJesu
15. Ishe, regai nditeerere zvakanyanya kumharidzo dzangu / zvidzidzo muzita raJesu
16. Baba, ndinopa masimba angu ese mauri, muzita raJesu.
17. Ndatenda Jesu, nekuti Ndimi bviro yebudiriro yangu.
Previous nyayaMakumi mashanu Masimba Emunamato Anopesana neVen'anga Varoyi
inotevera25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Zvese Manzwiro ehurwere uye Zvirwere
Yetunde Ndira 18, 2021 At 9:57 am
Oh Mwari wangu! Ini ndaitoda izvi. Ndinokutendai zvikuru mufundisi dai kuzodzwa kwenyu kusambofa kwakapera Muzita raJesu
Temple Fortune Chikunguru 5, 2021 Na3: 38 pm
Ndinokutendai zvikuru Mufundisi. Dai Ishe vazadzisa moyo wako zvishuwo. Ameni
Ngozi Chikunguru 29, 2021 At 10:56 am
Mufundisi kubwinya kwaMwari hakubve pauri, iwe ramba uchipasa huvepo pamberi pake uye zodzo haripere. IJN Ameni
Kunamata Points Kurwisa Kusagadzikana Kwemari
Kunamata Kutenda Mwari Nekunaka Kwake